Ukuhambela eHiroshima | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Japan
Elinye lamadolobha ezivakashi eJapan Hiroshima. Udumo lwayo ludume kabi njengoba kungumuzi wokuqala ukuba "ne-athomu", futhi yisizathu esenza izivakashi zakwamanye amazwe ziwuvakashele. Uhlelo lwezitimela lwaseJapan luhle futhi lukuvumela ukuthi ufike futhi ubuye kuzo zonke iziqhingi ngokushesha nangokuphepha. Ngakho-ke, ukujoyina iTokyo neHiroshima kuyinto oyenzayo phakathi nohambo lwamahora amane kuya kwamahlanu, oluhle kakhulu.
IHiroshima yidolobha elikhulu kunawo wonke esifundeni saseChugoku futhi inabantu abayisigidi. Umlando wayo washintsha unomphela ngo-Agasti 6, 1945 ngenkathi ubhujiswa yibhomu le-athomu. Kwakufanele yakhe kabusha, yize ingxenye yalesosikhathi esibuhlungu ihlala njengesikhumbuzo, iPeace Memorial Park. Iqiniso ukuthi lingumuzi othokozisayo, onendawo ezungezile ekufanele ukuvakashelwa, ngakho-ke namhlanje siphakamisa, uhambo oluya e-hiroshima.
1 Ungafika kanjani eHiroshima
2 Ungahamba kanjani eHiroshima
3 Yini ongayibona eHiroshima
4 Uhambo oluvela eHiroshima
Ungafika kanjani eHiroshima
Ngesitimela. Ngokuyinhloko leyo yindlela yokuhamba esetshenziswa kakhulu izivakashi. Kulezi zinsuku izindiza zinamanani amahle kakhulu ohambo lwangaphakathi kepha iziteshi zezitimela zitholakala kangcono kunezikhumulo zezindiza ngakho-ke azitholanga abalandeli abaningi. Uma uhamba ngendiza, izindiza zisuka esikhumulweni sezindiza iHaneda futhi kunezindiza eziningana ngosuku. Ubala ukuthi amanani entengo aphakathi kuka-12 no-17 ayizinkulungwane ezingama-yen. Indiza ithatha imizuzu engama-90 nje kodwa isikhumulo sezindiza saseHiroshima siyimizuzu engama-50 ukusuka enkabeni yedolobha.
Uma uhamba ungene ku- Shinkansen, isitimela sezinhlamvu zaseJapan, olayini yiJR Tokaido neSanyo. Izinsizakalo zeHikari neSakura zithatha phakathi kwamahora amane kuya kwamahlanu ukusuka eTokyo. Uma unephasi lezivakashi, okuthandwa kakhulu IJapan Ral PassUngasebenzisa lezi zinsizakalo ezimbili kepha hhayi esheshayo, ebizwa ngeNozomi. Akuyona inketho ethakazelisa kakhulu, kepha ibhasi eliphakathi kweTokyo neHiroshima lithatha amahora ayi-12.
Ungahamba kanjani eHiroshima
Uma uneJapan Rail Pass ungasebenzisa isitimela namanye amabhasi womphakathi. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa iMaple-oop, ibhasi lezivakashi elixhuma isiteshi esiphakathi nezindawo ezahlukahlukene zedolobha njalo uhhafu wehora. Idolobha linenethiwekhi yama-trams kepha kuzodingeka ubakhokhele ngokwehlukana. Ungathenga ukudlula kwamahora angama-24 ngokusetshenziswa okungenamkhawulo kwama-trams, ngentengo yama-yen angu-600. Ngama-yen angu-240 kufaka phakathi isikebhe esiya esiqhingini saseMiyajima, uhambo olujwayelekile, nesaphulelo esiqhingini se-funicular.
Yini ongayibona eHiroshima
Ngicabanga ukuthi kufanele uhlale eHiroshima cishe izinsuku ezintathu, ucabanga ukuthi awusoze wafika kusenesikhathi futhi ucabangela okuzungezile kwedolobha. Edolobheni uqobo ukuqokwa okungenakuhlehliswa yi- IPark Memorial Park. Ungafika lapho ngebhasi lezivakashi noma, uma uthanda ukuhamba ngezinyawo, hamba amakhilomitha amathathu phakathi kwesiteshi sesitimela nendawo. Ngaphambi kwebhomu le ngxenye yeHiroshima kwakuyinhliziyo yezombangazwe nezohwebo. Isakhiwo esidala sihleli simi, sicekelwe phansi ingxenye, futhi sizungeze umfula ipaki enkulu enezikhumbuzo nezikhumbuzo. Futhi nomnyuziyamu, kunjalo.
Umnyuziyamu unamabhilidi amabili futhi uxoxa indaba yebhomu nangezinsuku ezizayo edolobheni. Kukhona imodeli yayo, nebhomu, izithombe, ubufakazi, izinto ezincibilikiswe ukushisa okukhipha imisebe nokunye okuningi. Ukunakwa: umnyuziyamu uyalungiswa ngakho-ke kunezimbukiso ezimbalwa. Phakathi kukaSepthemba nyakenye nentwasahlobo ezayo iphiko lasempumalanga lizovalwa bese kuthi ibhilidi elikhulu livalwe kuze kube ngu-2018.
Ezinye izinto eziheha izivakashi edolobheni yilezi Inqaba yaseHiroshima, ukwakhiwa kabusha okumnyama okuyizitezi ezinhlanu okuzungezwe umsele wamanzi okusele imizuzu eyi-15 ukusuka eSikhumbuzo Park futhi kubiza ama-yen angama-370 ukungena kuwo. Kukhona futhi i- IMazda Museum, kubathandi bezimoto, futhi Ingadi yeShukkeien Ekuqaleni yaqala ngekhulu le-XNUMX futhi yinhle.
Nomuzi waseHiroshima? Ikhule kakhulu ngokuhamba kwesikhathi futhi indawo esemqoka yokuhamba, ukudla nokuthenga yiHondori Street. Yindawo yabahamba ngezinyawo eqala eduze neParque de la Paz, ehambisana nomgwaqo lapho kugudla khona amathilamu nezimoto. Ukuzama iHiroshima okonomiyaki, okukhethekile kwedolobha, kungcono ukuhamba uye ngasekupheleni kweHondori. Kunezindawo zokudlela eziningi lapho.
Uhambo oluvela eHiroshima
Indawo ezungeze idolobha inezintelezi zayo yingakho iseluleko sami ukuthi sihlale izinsuku ezintathu. I- Isiqhingi saseMiyajima uthishanhloko. Kungaphansi kwehora ukusuka edolobheni. Ufika ngesitimela nangesikebhe, zombili zimbozwe yiJapan Rail Pass. I-tori enkulu, ecwilisiwe kancane iyikhadi leposi elijwayelekile. Ukuza nokuhamba nokuzula kuthatha cishe usuku lonke. Enye indawo ongaya kuyo yidolobha lase- Iwakuni ngebhuloho layo elihle, iKintai-kyo, lihle kakhulu entwasahlobo. Ungavakashela ibhuloho, isigodlo kanye neKikko Park.
Futhi uma unesikhathi ungazi Onomichi, idolobha elisogwini. Lezi izeluleko zami ze- vakashela iHiroshima. Izinsuku eziningi kubonakala kimi ukuthi ngeke ube nokuningi kokukwenza, kepha ngezintathu kukhona okwanele ukwazi nokuhamba ngaphandle kokuxhamazela. Bengilapho eminyakeni embalwa edlule futhi ngo-Ephreli 2016 ngizobuya ngakho ngonyaka ozayo ngizoba namathiphu amaningi ngokuhambela eJapan.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Japan » Ukuhambela eHiroshima
7 yezinqaba ezinhle kakhulu eSpain